Senatar ka digay "Heshiisyo laga leeyahay dano gurracan" | KEYDMEDIA ONLINE
Senatar ka digay “Heshiisyo laga leeyahay dano gurracan”
Sanatar Abshir Maxamed Axmed, ‘Bukhaari’ oo ka mid ah Baarlamaanka Aqalka Sare ee waqtigiisu dhamaaday, ayaa Farmaajo ku eedeeyay inuu heshiisyo laga leeyahay ujeeddooyin gurracan oo la galayo Madaxda Eratariya iyo Itoobiya.
MUQDISHO, Soomaaliya - Sanatar Abshir Maxamed Axmed, ayaa sheegay in Farmaajo oo hore u galay heshiisyo aan caddeyn uu hadda doonayo inuu mar labaad saxiixo heshiisyo uu la garab marayo golayaasha Doowladeed ee u xil saran in ay go’aan ka gaaraan arrimaha ceynaakas ah.
“Iyada oo hore ay u jireen heshiisyo mugdi ah oo baalmarsan habraaca gelidda heshiisyada dalka, ayuu madaxweynaha xiliguusu dhammaday Maxamed Farmaajo waxa uu qorsheynayaa inuu galo heshiisyo hor leh oo lala garab marayo goleyaasha dowladeed ee u xilsaaran go'aan ka gaaridda gelidda heshiisyada caalamiga ah”. Ayuu yiri Sanatar Bukhaari.
Senator-kii ugu horeeyay ee Soomaaliya, Bukhaari, wuxuu la yaab ku tilmaamay heshiiyo lala galayo Kali-talis dadkiisa caburinayay mudoo dheer iyo RW ku eedeysan doorasho diidnimo iyo dagaalo sokeeye, wuxuuna is weydiiyay waxa uu Farmaajo kala soo laaban karo.
“Waxaase ka sii daran in heshiisyadaasi uu la gelayo Eratariya, oo ah dal dadkiisu gacanta ugu jiraan kelitaliye manaxe ah oo doorasho iyo dimoqraadiyadba diidan, iyo Itoobiya oo hoggaankeedu lagu eedeynayo doorasho diidnimo iyo dambiyo dagaal oo ka dhan ah dadkiisa”. Ayuu yiri Abshir Maxamed Axmed.
Guddoomiye ku xigeynka Aqalka Sare, ayaa ugu danbeyn heshiiyada uu hadda Farmaajo galayo ku tilmaamay kuwo leh ujeeddooyin gurracan oo u adeegaya danaha siyaasadeed ee madaxweynaha sharciyadiisii dhammaatay Febrraayo 8, 2021.
Farmaajo ayaa la filayaa inuu dhawaan u safro Addis Ababa ama Casmara midkood, halkaas oo uu ku soo saxiixi doono heshiisyo la xarira is kaashi aan bannaanka la soo dhigin oo hore u dhex maray Saddexda Kali-taliye.